Izindatshana zikaSenraj Soundar ku Martech Zone |
Imibhalo nge USenraj Soundar
USenraj uhola iqembu labaphathi ku I-ConnectLeader maqondana nomgomo oyinhloko "wokwenza kahle kwezobunjiniyela kanye nokwenziwa kwamakhasimende amakhulu". Ngaphambi kwe-ConnectLeader, wasungula izinkampani ezimbili eziphumelelayo zezinsizakalo zesoftware ezazisebenzisa abasebenzi abangaphezu kwekhulu kulo lonke elase-US futhi zakha imikhiqizo yamakhasimende ethuthukile. USenraj uthole i-MS kwi-Computer Science degree (ngeziqu eziphakeme kakhulu) e-University of Massachusetts kanye ne-BS degree ku-Electrical Engineering evela e-Anna University, e-Chennai, e-India. Ngo-1992, uSenraj wathola i-'National Technology Award 'ehlonishwayo kuMongameli wase-India ngokusungulwa okungcono kakhulu ezweni.
Ingabe Abantu Abathengisayo Bayothathelwa Indawo Ngamarobhothi?
ULwesihlanu, July 14, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 USenraj Soundar
Ngemuva kokuthi uWatson abe ngumpetha weJeopardy, i-IBM yahlangana neCleveland Clinic ukusiza odokotela ukuthi basheshise futhi bathuthukise amazinga okunemba kokutholakala kwabo kanye nemiyalelo. Kulokhu, uWatson wengeza amakhono odokotela. Ngakho-ke, uma ikhompiyutha ingasiza ekwenzeni imisebenzi yezokwelapha, impela kungabonakala sengathi umuntu angasiza futhi athuthukise amakhono omthengisi. Kepha, ingabe ikhompyutha iyoke ithathe isikhundla sabasebenzi bokuthengisa? Othisha, abashayeli, ama-travel agents, kanye